Uluhlu lwakho olupheleleyo lokuThengisa | Martech Zone
Uluhlu lwakho lokujonga lokuThengisa
Umthengisi wombhalo ubeke le infographic kuyo Amanyathelo ama-5 esiCwangciso seQhinga esiPhumeleleyo. Iindawo ezi-5 zezi:
Uphicotho kunye noHlahlelo
Indalo kunye nokuhlwayela
Ukubeka iliso nokulawula
Ukuba bendiza kufinya nantoni na, bekuya kuba njalo wokuKhuthaza. Ngelixa ukutyala abantu abanefuthe kuluncedo, ukukhuthazwa komxholo ohlawulelweyo ngamajelo asekuhlaleni, intengiso yemveli, kunye nokuhlawula ngokucofa qhinga zizicwangciso ezimangalisayo. Ngokuqhelekileyo, siqala ukunyusa emva kokuqinisekisa ukuba umxholo uhambelana nabaphulaphuli kunye nokuqhuba ukubandakanya kunye nokuguqulwa.
Injongo iyafana nokusebenzisa abachaphazeli- ufuna ukukhuthaza umxholo wakho kubaphulaphuli abafanelekileyo ongafikeleli kubo ngoku. Intengiso yempembelelo inomphetho ngenxa yokuba abachaphazeli ngokwenyani bakhe ukuthembana kunye negunya kubaphulaphuli babo ukuze ubone inqanaba lokuguqula elingcono kunye nabo - kodwa oko akufuneki kukuyekise ekukhuthazeni imali.
Kudos kubabhali boluhlu lokutshekisha. Sisatyhalela emva kunye neenkampani ezininzi kwezi zabo Mveliso qhinga. Khawufane ucinge ukuba usebenza kwimveliso yokwakha iiwijethi. Ngaba ungaqhubeka uvelisa iiwijethi ukuba bekungekho mntu uzithengayo? Kutheni iinkampani ziqhubeka nokuvelisa umxholo ekungekho mntu uzibandakanya nawo? Bachitha ixesha, imali, kwaye banokubenzakalisa ukuthengisa kwabo kunokuba bancede.
Ukuba nesicwangciso esicacileyo yinto ebalulekileyo kwimpumelelo yalo naliphi na iphulo lokuthengisa umxholo. Ngenxa yokuba icandelo lokuthengisa umxholo lisencinci kakhulu, nangona kunjalo, akukho ndlela yakhona imiselweyo okanye iikhosi zokuziqhelanisa. Ukwazi ukuba ungabandakanya ntoni kwisicwangciso somxholo, kufuneka sisebenze njani, yonke into ifanele ukudityaniswa kunye nokufezekiswa- zonke ezi zinto ziqwalaselwa ziinkampani ezininzi kuvavanyo kunye nempazamo.
Gcwalisa uLuhlu lokuKhangela lokuThengisa
tags: uluhlu lokuhlolauphicotho-mxholoulawulo lomxholoukudalwa komxholoinkcazo yomxholoukuphuhliswa komxholoiinjongo zomxholoUkuThengiswa kweMpahlauphicotho-zincwadi lokuthengisaUluhlu lokujonga lokuthengisaumxholo wentengiso infographicukubeka iliso kumxholoucwangciso lomxholoUmxholo wembewuTextbroker
Ngaba isebenza ngokuSasaza ngokuBonakalayo iBrand yakho?